“Dhex ayaan kasoo laabtay si aan mar kale u hubiyo inaanan ku jirin ardayda dhacday!” – Dhacdo dhab ah | Hadalsame Media
Home Maqaallada “Dhex ayaan kasoo laabtay si aan mar kale u hubiyo inaanan ku...
“Dhex ayaan kasoo laabtay si aan mar kale u hubiyo inaanan ku jirin ardayda dhacday!” – Dhacdo dhab ah
(Hadalsame) 22 Luulyo 2021 – Fasalka labaad ee dugsiga sare markaan imtixaankii dhammaynay ayaan fasax galnay. Bil ka dib ayaa anigoo habeen safaaradihii Keenya, Iiraan, Yoguslaafiya iyo Kuuriya oo isku meel ku yaalley sawirro ay hortooda ku soo dhejiyeen daawanaya, ayaa waxaa i salaamay arday aan iskuulka wada dhiganno. Wuxuu ii sheegay in imtixaankii la soo dhejiyey oo fasalkayga 17 arday ka dhaceen.
Waxaan ku iri ninyohow 17 aan wax ka badiyo maba jirin marka shaki la’aan waa ku jiraa. Wuxuu yiri waayahee 17 wax kaa badiya ma jireen. Waxaan iri maya. Wuxuu yiri waxba ha welweline subixii soo eeg.
Ma aqaan habeenkii inaan seexday laakiin toddobadii subaxnimo waxaan taagnaa liido oo uu ku yaalley Dugsigii Sare ee Badda. Waxaan ka imi Buulaxuubeey. Markii la furay ayaan magacyadii oo derbi ku dheggan fiiriyey. Hal hal ayaan kuwii dhacay u akhriyey. Nin aan isu magac egnahay oo aan filayey inuu dhacayo ayaa ku jira.
Markaan ilaa shan goor isha mariyey ayaan is iri ninkaas armaa magacaagii lagu qalday o aad adigu dhacday. Xafiiska maamulka ayaan tegey oo waxaa la ii sheegay inuu wiilkii kale yahay. Anigoo faraxsan ayaan soo baxay oo soo lugeeyey. Markaan soo gaaray meel u dhaw safaaraddii Maraykanka iyo Shareero, ayaan is iri armaadan si fiican u akhrin magacyadii, waa noqday oo haddana mid mid u akhriyey ilaa aan ku qancay inaan gudbay.
Ardaygu inuu dhaco welwel iyo culays ayay ahayd. Waxaan maqlay in waqti 70aadkii ah ilmo badan dhibaato is gaarsiiyeen markay dhaceen ilaa dawladdii kacaanku wax ka beddeshay habka imtixaannada loo maamulo.
Waxaa jira waddamo aan ardaydu dhicin inta ay yar yihiin oo aanay facood ka harin. Kuwa markay weynaadaan jaamacad waayana lagu jiheeyo cilmi farsamo iyo xirfad ay ku shaqaystaan oo marmar kaba fiican jaamacadaha.
Arday walba waa waxtar oo imtixaannada keliya wax laguma miisaami karo. Laakiin waa in dawladdu qorshaysaa siday kartiyaha kala duwan ee ardayda u wada adeejin lahayd.
Previous articleDF Somalia oo Ireland kala hadashay qodob istaraatiji ah oo muhim ah
Next articleSAWIRRO: Maraakiib dagaal oo uu leeyahay dal Muslim ah oo lagu arkay xeebaha fog ee Scandinavia (Halka ay u socdaan?)